thinzar's blog: ဒီဇိုင်း နဲ.ပါတ်သတ်ပြီး
14/2/07 8:48 PM
ဒီလိုအားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. “Nothing is impossible” ဆိုပေမယ်. “Jack of all trades but master of none.” ဖြစ်နေမှာကိုတော. ကြောက်နေတာ.. ဒါပေမယ်. Design လုပ်ရတာတော.ကြိုက်တယ်..
www.nativemyanmar.com ဖိုရမ်လေးမှာ လွယ်လွယ်ကူကူလိုက်လုပ်လို့ရတဲ့ ဖိုတိုရှော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို လိုက်ရှာဖတ်လို့ရပါတယ်
4/3/07 12:08 AM
ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ photoshop စာအုပ် တွေနဲ့ programming စာအုပ်တွေ တော်တော် များများ ကျနော့် blog library မှာတင်ထားပါတယ်။ လာကြည့်ပါအုံး၊ အသုံးတည့်မယ် ထင်ပါတယ်။
18/3/08 9:20 PM